Amamethrikhi Omcimbi Osemqoka Izikhulu Zonke Kufanele Zilandele | Martech Zone
NgoLwesithathu, ngoMashi 6, 2019 NgoLwesithathu, ngoMashi 6, 2019 URavi Chalaka
Umthengisi onolwazi uyaziqonda izinzuzo ezivela emicimbini. Ngokuqondile, esikhaleni se-B2B, imicimbi ikhiqiza ukuhola okuningi kunezinye izinhlelo zokumaketha. Ngeshwa, imikhondo eminingi ayiphenduki ekuthengiseni, ishiya inselelo kubakhangisi ukuthola ama-KPI angeziwe ukufakazela ukubaluleka kokutshala imali emicimbini ezayo.
Esikhundleni sokugxila ngokuphelele kumikhondo, abathengisi kudingeka bacabangele amamethrikhi achaza ukuthi umcimbi wamukelwe kanjani ngamakhasimende, abathengi bamanje, abahlaziyi nokuningi. Kubaphathi, ukwazi ukuqonda ukuthi ungasithuthukisa kanjani isipiliyoni somcimbi jikelele kungasiza ukushayela imiphumela engcono ngokuzayo.
Ukuthola lawa ma-metric kulula ukusho kunokukwenza. Ukusiza amaqembu wokumaketha ukuthi avikele isabelozimali somcimbi wesikhathi esizayo, ngihlanganise amamethrikhi amathathu abathengisi abangawasebenzisa ngama-CMO abo.
Ngenkathi izinombolo zokuthengisa nemikhondo emisha izohlale ibalulekile kuma-CMO, zisabakhathalela ngamanye amamethrikhi njengokuqashelwa komkhiqizo. Ngesikhathi somcimbi, qiniseka ukuthi unaka amanye amamethrikhi njengokuvakashelwa amawebhusayithi, inani lezingxoxo zabezindaba ezihleliwe kanye nokushiwo kwabezindaba zenhlalo. Ukuze ubone imiphumela yala ma-metric, bheka isabelo sezwi langaphambi nangemuva komcimbi ukuze ubone ukuthi ukwazile yini ukusika izimbangi zakho ngenkathi uhambele lo mcimbi. Okokugcina, imicimbi ingasetshenziselwa ukuqoqa umbono wenkampani yangaphandle. Cabanga ukusingatha ucwaningo ngesikhathi somcimbi ukukhombisa imiphumela ezungeze ukuqwashiswa komkhiqizo jikelele noma ukuqashelwa ukuze wabelane nge-CMO yakho.
Inani leMihlangano Yesu
Nsuku zonke, sonke siba nemihlangano ngocingo. Kodwa-ke, ukuthatha isikhathi sokuba nomhlangano ubuso nobuso kubalulekile ukuze kuvalwe amadili. Chitha isikhathi ulinganisa inani lemihlangano yobuso nobuso bekhwalithi phakathi komcimbi wakho bese uqhathanisa leyo nombolo kumamethrikhi alandelayo:
Ukugcinwa Kwekhasimende: Ukuthola amakhasimende amasha kubalulekile, kepha ukugcina amakhasimende akho amanje kungadlala indima enkulu ekugcineni ukuqhuma kwakho nokwandisa imali engenayo. Imihlangano yomuntu uqobo ingasiza ekuqiniseni lobu budlelwano futhi iqale izingxoxo ezidingekayo.
Khulisa Ibhizinisi: Ngamakhasimende amaningi ahambela imicimbi efana neyakho, kwenze iphuzu ukusebenzisa leli thuba ukwakha ubudlelwano nokukhulisa ibhizinisi kuma-akhawunti akhona.
Amadili avaliwe: Ngabe unamamethrikhi akhombisa ukuthi mingaki imihlangano yobuso nobuso eholele kuzivumelwano ezivaliwe? Yini enye eyabamba iqhaza ekuvaleni leso sivumelwano? I-SME noma umphathi othile? Ngokuba nalolu lwazi ungahlelela kangcono imicimbi ezayo.
Ukuqondanisa phakathi kokuthengisa nokumaketha kudlala indima enkulu ekuholeni kokushayela, ukuvala amadili futhi ekugcineni kukhuphuke imali engenayo. Imicimbi inika amaqembu okuthengisa nawokumaketha isitolo esisodwa ukuze athinte umugqa wenkampani. Ukubonisa lokhu ku-CMO, qiniseka ukukala amamethrikhi agxile kokulandelayo:
Inani Lamademo: Vele izinkampani zizovikela ukuhola emicimbini, kepha ingabe leyo mikhombandlela ihlale ifaneleka? Esikhundleni sokulandela kuphela inani lokuhola emicimbini, landela inani lamademo aqediwe. Lokhu kunganikeza amaqembu ukuqonda okucacile ukuthi yimaphi amakhasimende angaba khona anentshisekelo yangempela kumkhiqizo futhi angonga isikhathi samaqembu okuthengisa. Ngokwengeziwe, le metric ingakhombisa ama-CMO indima edlalwe ngumcimbi ekwethuleni idemo.
Ukusebenza Komhlangano: Ukulandelela inani lemihlangano ehleliwe eliguqulelwe emathubeni kungakhombisa ukuthi obaphi abamele abathengisi abaphumelela kakhulu ekuqhubekiseleni phambili amadili. Le metric ayibalulekile kuphela ku-CMO yakho, kepha nakwiNhloko Yezentengiso ukuze bathole ukuqonda okungcono kwamandla ommeleli ngamunye. Lolu lwazi lungasiza abathengisi ukuthi babekwe kangcono kulo lonke uhambo lwamakhasimende futhi lunikeze ukuqonda ukuthi ngubani okufanele aye emicimbini ezayo.
Isilinganiso Sosayizi Wedili: Impumelelo evela emicimbini ayihlali ilinganiswa ngenani lamadili avaliwe. Esikhundleni sokunaka konke ukunaka kwakho kuzipesheli ezinkulu ezinamazinga empumelelo aphansi futhi kuthathe isikhathi eside ukuvala, naka usayizi wesivumelwano esimaphakathi ukuze usize ukukhomba amathemba ayikhasimende elifanele eliqonde ngqo endaweni efanele.
Bonke abaphathi baqhutshwa yimiphumela. Ukuchitha isikhathi ngaphambi, ngesikhathi, nangemva kwemicimbi ukuhlaziya okusebenzile nokuthi yini engathuthukisa kuzonikeza abathengisi, abahleli bemicimbi nabaphathi ukuqonda kangcono kwezinguquko okumele zenziwe ukuqinisekisa ukuthi imicimbi yesikhathi esizayo iyaphumelela. Ngokusebenzisa indlela eqhutshwa ngamamethrikhi, abathengisi bazoba nesikhathi esilula sokuthethelela ukutshalwa kwezimali emicimbini, okushiya iqembu labaholi kungekho enye indlela ngaphandle kokukhulisa ukwabiwa kwesabelomali semicimbi yesikhathi esizayo.
Tags: b2bukuqashelwa komkhiqizoukumaketha kwengqungquthelaukutholwa kwamakhasimendeukugcinwa kwamakhasimendeamadili avaliweukudayiswa komcimbiIzingqungquthela Zokumakethaukusebenza komhlanganoimihlangano yokuthengisaimihlangano yamasu
Izindawo Zokuhweba Zenza Ukuhweba Okungaxhunyiwe Ku-inthanethi Kuphephe Kakhulu